နားထောင်မှု စွမ်းရည်လေ့ကျင့်လိုသော ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အကျိုးရှိနိုင်သူများ / အသုံးပြုသင့်သူများ
ဤ အပ်ပလီကေးရှင်း ကို အောက်ပါ အချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နားအကြားအာရုံ လျော့နည်းသောကြောင့် နားကြားကိရိယာ ၊ အတွင်းနား အစားထိုးခွဲစိတ်မှု ( CI ) ၊ အကြားအာရုံ အစားထိုးခွဲစိတ်တပ်ဆင်မှု့ ဒါမှမဟုတ် အကြားအာရုံအထောက်အကူပြုကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသူများအတွက် နားထောင်မှုစွမ်းရည် လေ့ကျင့်ရာတွင်လည်းကောင်း
လေဖြတ်ပြီး (သို့မဟုတ်) အာရုံကြော ရောဂါတခုခုကြောင့်အကြားအာရုံကြော ထိခိုက်သူများတွင် လည်းကောင်း
ဘာသာစကားအသစ် သင်ကြားနေသူများအတွက် ၄င်းဘာသာစကား အသံထွက်ကို နားလည်အောင် လေ့ကျင့်လိုသူများအတွက် လည်းကောင်း
လေ့ကျင့်ရန် အဆင့် ၃ ဆင့် – အဆင့် ၁ ၊ အဆင့် ၂ ၊ အဆင့် ၃ ဆိုပြီး ပါဝင်ပါသည်။ အဆင့်တစ်ဆင့်စီတိုင်းအတွက် အခန်း ၅ ခန်းပါ၀င်ပြီး အခန်းတစ်ခုစီကို စာလုံးအတွဲ Pairs of Words (PoW) ၁၀ လုံးစီပါဝင်ပါသည်။
အောက်ပါ ဘာသာစကား နှင့် အသံထွက်များ ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
Canadian and France
Argentina, Castellano and Colombia
ဘာသာစကား အသံထွက် တစ်ခုစီတိုင်းတွင် အမျိုးသားအသံ နှင့် အမျိုးသမီးအသံ တစ်ခုစီ ပါဝင်ပါသည်။
Audio နှင့် Video နည်းပညာများ အသုံးပြု အသံဖမ်းယူထားပြီး သင့်တော်သော နားထောင်မှု အခြေအနေများ ခွဲခြားထားပါသည်။ အသံကျယ်နှုန်းအတွက် Loudness unit full scale ( LUFS ) နှင့် ဖမ်းယူထားပြီး ဘာသာစကား တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အသံတို့ကို ချိန်ညှိပေးထားပါသည်။
လေ့ကျင့်မှု အဆင့် ၂ နှင့် အဆင့် ၃ တို့တွင် နောက်ခံပါတ်ဝန်းကျင် အသံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။တကယ့်ပြင်ပ ပါတ်ဝန်းကျင် အသံများကို နောက်ခံထား လေ့ကျင့်နိုင်သောကြောင့် အကြားအာရုံလျော့နည်းသူများ လေ့ကျင့်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
နောက်ခံပါတ်ဝန်းကျင် အသံ ၁၅ မျိုး ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အပြင် မိမိထည့်သွင်းလိုသော နောက်ခံအသံကို mp3 format ဖြင့် ထည့်သွင်း၍လည်း လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ရာတွင် စပီကာ ( ဖုန်း ၊ Device အမျိုးမျိုး ) မှ ထွက်သော အသံကို နားထောင်နိုင်သလို မိမိတပ်ဆင်ထားသော နားကြားကိရိယာစက်တို့ကို Bluetooth မှတဆင့် ချိတ်ဆက်၍လည်း ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်မရှိစေဘဲ လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
Bluetooth နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သောကြောင့် အကြားအာရုံတစ်ဖက်တည်း လျော့နည်းသူများ ၊ အသစ် ခွဲစိတ်တပ်ဆင်ထားသူများအတွက် တစ်ဖက်တည်းလေ့ကျင့်လိုသော ဘက်ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
စပီကာမှ အသံထွက်ကို နားထောင်ရန်အတွက် အရင်ဆုံး Ambient Noise ကို တိုင်းတာပါသည်။ (Ambient Noise – လေ့ကျင့်သူ၏ ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်အသံ ) ။ ပါတ်ဝန်းကျင် ဆူညံမှု အသံအရမ်းကျယ်နေပါက လေ့ကျင့်သူကို နေရာရွှေ့ဖို့ အကြံပြုပါလိမ့်မည်။
အသံကျယ်နှုန်း Comfort Level ကိုလည်း ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။အသံချိန်ညှိချိန်တွင် အောက်ပါအသံ
“We are now testing your comfort level, please adjust the bar to the left for quiet or the right for loud until you can hear the voice easily” ကို နားထောင်ပြီး ဘယ်ညာ ရွှေ့၍ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
အသံအတိုးအကျယ်ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၂ နှင့် အဆင့် ၃ ကို လေ့ကျင့်ရာတွင် နောက်ခံ အသံအတိုးအကျယ် ၆ ဆင့်အား မိမိလိုသလို ထားနိုင်ပါသည်။
၁။ Very Soft (app. SNR +20dB)
၂။ Soft (app. SNR +15dB)
၃။ Medium (app. SNR +10dB)
၄။ Loud (app. SNR +5dB)
၅။ Very Loud (app. SNR 0dB)
၆။ Extreme (app. SNR -5dB)
ဤကဲ့သို့ ချိန်ညှိရာတွင် SNR ( Signal to noise ratio ) ကို အသုံးပြု၍ တခါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
Signal – App မှ ထွက်ပေါ်လာသော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး
Noise – App တွင် ပါဝင်သော နောက်ခံသံ ၁၅ မျိုးထဲမှ ကြိုက်ရာတစ်ခု
SNR ကို အောက်ပါကဲ့သို့ တိုင်းတာထားပါသည်။
ဥပမာ ၁ – App မှ ထွက်လာသော အသံ ( signal ) သည် 60 dB ရှိပြီး ရွေးထားသော အဲကွန်းနောက်ခံအသံ
( Noise ) သည် 40 dB ရှိလျှင် 60 dB – 40 dB : SNR သည် + 20 dB ဖြစ်သည်။
ဥပမာ ၂ – App မှ ထွက်လာသော အသံ ( signal ) သည် 50 dB ရှိပြီး ရွေးထားသော အဲကွန်းနောက်ခံအသံ
( Noise ) သည် 55 dB ရှိလျှင် 50 dB – 55 dB : SNR သည် -5 dB ဖြစ်သည်။
App ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသော အသံများကို အသုံးပြုသော မိုဘိုင်းဖုန်း၏ စပီကာမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်အသံချိန်ညှိရာတွင် အသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းဖုန်း၏ မိုက်ခရိုဖုန်းမှတဆင့် အသံဖမ်းယူသောကြောင့် ဖုန်း၏ စပီကာ နှင့် မိုက်ခရိုဖုန်း ကောင်းမွန်မှု အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်သာ ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း APP ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁ – Direct Audio Input (Bluetooth) အသုံးပြု မပြု ရွေးပါ။
အဆင့် ၂ – ပါတ်ဝန်းကျင် ဆူညံမှု တိုင်းတာခြင်း
အဆင့် ၃ – အသံကျယ်နှုန်း ချိန်ညှိခြင်း
လေ့ကျင့်မှု အဆင့် ၁ နှင့် အဆင့် ၂ မှ စတင်ပါက အောက်ပါအဆင့်အတိုင်း APP ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၄ – နောက်ခံအသံ အသုံးပြု မပြု ရွေးချယ်ပါ
အဆင့် ၅ – နောက်ခံအသံ အတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ
အဆင့် ၆ – နောက်ခံအသံအမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ
လေ့ကျင့်မှုအဆင့် ၁ ခုပြီးတိုင်း ( module ၅ ခု ) လေ့ကျင့်မှု အဖြေရယူရန် ဝယ်ယူထားပါက မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်သို့ အဖြေကို ပို့ပေးပါသည်။
စာလုံးတွဲ တစ်ခုစီတိုင်း လေ့ကျင့်ရာတွင် ပါတ်ဝန်းကျင် ဆူညံမှုအသံနှုန်း
စာလုံးတွဲ တစ်ခုစီတိုင်း လေ့ကျင့်ရာတွင် ကြားနိုင်မှု အခြေအနေ
Direct Audio Input / Bluetooth နှင့် ချိတ်ဆက်လေ့ကျင့်ခြင်
ဤသို့အသုံးပြုရာတွင် App မှ ထွက်လာသော အသံများကို လေ့ကျင့်မည့်သူ တပ်ဆင်ထားသော နားကြပ် (သို့မဟုတ်) နားခွဲစိတ်စက် သို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်း၏ စပီကာ နှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းတို့ကို အလိုအလျောက် ပိတ်ထားပေးပါသည်။ထို့ကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင် ဆူညံသံ အတိုးအကျယ် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် မလိုပါ။
အောက်ပါအဆင့်များတွင် App ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁ – Direct Audio Input (DAI) ကို ရွေးပါ။
အဆင့် ၂ – နားထောင်လိုသော အသံကျယ်နှုန်း ချိန်ညှိပါ။
လေ့ကျင့်မှု အဆင့် ၁ နှင့် အဆင့် ၂ စတင်ပါက အောက်ပါအဆင့်အတိုင်း App ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၃ – နောက်ခံအသံ အသုံးပြု မပြု ရွေးချယ်ပါ
အဆင့် ၄ – နောက်ခံအသံ အတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ
အဆင့် ၅ – နောက်ခံအသံအမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ
DAI / Bluetooth ကို အသုံးပြုရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့် အသုံးပြုသူ၏ စက်တို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး စကားလုံးတို့၏ ကျယ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။
App မှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံ ( SIGNAL ) နှင့် နောက်ခံဆူညံမှုအသံ ( NOISE ) ကို အသုံးပြုသူ နားထောင်လိုသော (Comfort Level) ပေါ် မူတည်ပြီး တွက်ချက်ထားပါသည်။
App မှ ထွက်ပေါ်လာသော ( NOISE ) ကို SNR ပေါ် မူတည်ထားသော ဘယ်ဂိုရစ်သမ် အသုံးပြုထားသော်လည်း မမျှော်လင့်နိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အသုံးပြုသော စက် ချိတ်ဆက်မှု ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၏ ဆော့ဝဲလိုအပ်မှု ပြဿနာများကြောင့် ဆူညံမှုအသံ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
ရရှိလာသော အဖြေကို မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ရန်မျာ
အဖြေရရှိပါက Speech & Language Therapist (အသံနှင့်ဘာသာစကား ကုထုံးပညာရှင်များ) ၊ AVT (စကားပြောကုထုံးပညာရှင်များ) နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သော လမ်းညွှန်မှုများ ရယူနိုင်ပါသည်။
App အပ်ပလီကေးရှင်း ရယူရန်အတွက် အောက်ပါ QR Code ကို Scan ဖတ်နိုင်ပါသည်။ For IOS/Apple or Google / Android or Huawei devices.